Sida loo sameeyo wicitaan fiidiyoow ah oo ku saabsan Websaytka WhatsApp, talaabo talaabo ah - Mobile Forum | Golaha Moobaylka
Sida loo sameeyo wicitaan fiidiyoow ah Webka WhatsApp, talaabo talaabo ah
Michael Hernandez | | Shabakadaha Bulshada, WhatsApp
ka Wicitaanada video aad bay caan u noqdeen, waana la fahmi karaa in shaqadan la shaqeeyay waqti hore WhatsApp, Isticmaalayaashu waxay doortaan inay ka faa'iideystaan ​​qaabkan ugu caansan ee farriinta farriimaha suuqa, taasi waa sababta, annagoo garaneyna adeegsadaha isticmaalaha, waxaan u dooranay WhatsApp inaan ku sameyno wicitaankeena shakhsi ahaaneed ama shaqo.
Shirkaddu waxay dooratay inay soo bandhigto "web" nooc ka mid ah barnaamijkeeda oo noo oggolaanaya inaan uga faa'iideysano inta badan astaamaheeda si toos ah kombuyuutarkeena, wicitaanada fiidiyowga ayaa ka mid ah. Waxaan ku tusineynaa sida aad wicitaano fiidiyoow ah uga sameyn karto WhatsApp Web si aad uga faa iideysato.
1 Siyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo WhatsApp Web
1.1 WhatsApp Web ka biraawsarka
1.2 WhatsApp Web ka arjiga
2 Dhibaatooyinka Shabakadda WhatsApp
2.1 U isticmaal WhatsApp Web laba kombiyuutar isla mar
2.2 Isticmaal WhatsApp Web adiga oo aan taleefanka marin
3 Sida wicitaanada fiidiyowga loogu sameeyo WhatsApp Web
4 Beddelka WhatsApp si loogu sameeyo wicitaanno fiidiyoow ah
4.4 Facebook Rasuulka
Siyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo WhatsApp Web
Waxa ugu horeeya ee aan ku tusi doono waa siyaabaha kala duwan ee aan ugu isticmaalno Shabakada WhatsApp, waana taas in kasta oo ay dad badani ka fikiraan, waxaan haysanaa wax kabadan hal. Aynu eegno fursadaha kala duwan ee soo baxa.
WhatsApp Web ka biraawsarka
Tani waa waxqabadka ugu caansan ee la yaqaan, ee ah isticmaalka Webka WhatsApp ee biraawsarka, tani waa mid aad u fudud, in laga isticmaalo WhatsApp Web ka biraawsar kasta oo la jaanqaadi kara oo kaliya waa inaan geli cinwaanka soo socda oo raadi: "web.whatsapp.com".
Sidan oo kale Waxaa naloo wareejin doonaa qeybta Websaydhka WhatsApp oo waxay na tusaysaa nambarka QR ee shaashadda. Hadda waxaan aadeynaa barnaamijka WhatsApp si aan u awoodno inaan iskaanno QR una xirno WhatsApp Web.
Waxaan si fudud u galnaa WhatsApp, guji "Dejinta" oo waxaan dooranay ikhtiyaarka «WhatsApp Web / Desktop». Kaamirada waxaa loo furi doonaa in lagu baaro nambarka QR isla markaana si otomaatig ah ayuu ku xirmi doonaa.
Sida loogu wareejiyo WhatsApp kaarka SD qaab fudud
WhatsApp Web ka arjiga
WhatsApp waxay leedahay codsiyo ku habboon Windows iyo macOS Si aad u awoodo inaad ku isticmaasho WhatsApp Web arjiga desktop-ka, tani waxay sahlaysaa in la isticmaalo oo aan dhammaad lahayn oo raaxo leh, maaddaama mararka qaarkood aanu u xirno barsiiyaha si qalad ah.
Waxaad ku soo dejisan kartaa codsiyada Webka WhatsApp macOS iyo Windows xiriirada soo socda:
Soo Degso Shabakadda WhatsApp loogu talagalay Windows: LINK
Soo Degso Shabakadda WhatsApp loogu talagalay macOS: LINK
Xiriiriyaha Windows-ka waxaad fursad u heli doontaa inaad kala soo baxdo labadaba qalabka 32-bit iyo 64-bit, waxay kuxirantahay baahida qalabkaaga. Hada isku xidhka waa u fududahay inaad raacdo tilmaamo isku mid ah sidii hore.
Markii aan rakibnay ayaan fureynaa arjiga iyo waxay na tusi doontaa lambar QR ah sidii horeyba ugu dhacday nooca biraawsarka, Waxaan si fudud ugu laabaneynaa ikhtiyaarka ah inaan iskaanno QR code si aan ugu isticmaalno WhatsApp Web arjiga laftiisa isla markaana si otomaatig ah ayuu isugu xiri doonaa
Sidoo kale hadda waxay na tusi doontaa si toos ah ogeysiisyada en kombiyuutarka Tanina waa faa'iido, gaar ahaan haddii aan ugu isticmaalno deegaan xirfad leh.
Dhibaatooyinka Shabakadda WhatsApp
Waxaan hadda kaala hadli doonnaa dhibaatooyinka ugu badan ee ku dhaca WhatsApp Web, si aad ugu tixgeliso markaad isticmaaleyso oo aad si gaar ah kuu xusuusineyso xaddidnaanta.
U isticmaal WhatsApp Web laba kombiyuutar isla mar
Waa inaan gebi ahaanba meesha ka saarnaa suurtagalnimada adeegsiga Webka WhatsApp laba aaladood oo isku mar ah. Waxaan awoodi doonnaa inaan ku isticmaalno WhatsApp Web isla waqtigaas oo aan farriimaha uga dirno casriga, kaliya.
Tani waa sababta oo ah WhatsApp maahan barxad «daruuraha», sidaas darteed Markuu nidaamku ogaado inaan isticmaaleyno xiriir kale oo Webka WhatsApp ah, wuxuu si otomaatig ah u xiraa kalfadhiga ugu da'da weyn wuxuuna noo soo diraa fariin digniin ah.
Haddii aad rabto inaad adeegsato qaab isku-dhafan iyo nidaam isku mid ah, waa inaad doorataa waxyaabo kale sida Facebook Messenger ama Telegram.
Maxay yihiin iyo sida loo abuuro laba barnaamij oo ku saabsan Android
Isticmaal WhatsApp Web adiga oo aan taleefanka marin
Mar labaad waxaan samaynaynaa qayb-hoosaadkan. Marka laga hadlayo WhatsApp Web, macluumaadka farriimahayagu kuma kaydsan server kasta, tanina waa qodob aan fiicnayn.
Xaqiiqdii, moobilkeennu wuxuu u shaqeeyaa sidii adeege, taasina waa waxa si toos ah noo sababaya inaan awoodno inaan damino taleefanka ama ka saarno xogta. Tani waxay ka dhigeysaa adeegsiga WhatsApp Web adeegsiga batteriga.
Sidaa darteed, waxaan meesha ka saareynaa suurtagalnimada adeegsiga Shabakadda WhatsApp iyadoo taleefanka la damiyay ama uusan ku xirneyn xogta moobiilka.
Sida wicitaanada fiidiyowga loogu sameeyo WhatsApp Web
Waxaa la gaadhay waqtigii la gali lahaa waxaad raadineysay, suurtagalnimada samee wicitaanno fiidiyoow ah iyada oo loo marayo WhatsApp, waana arrin dhib badan.
Sababaha aan horay u soo sheegnay ee ah "Dhibaatooyinka Webka WhatsApp" waxaan leenahay xaddidaadyo dhowr ah, tan koowaad ayaa ah inaan runtii si loogu sameeyo wicitaano fiidiyoow ah Websaydhka WhatsApp waa inaan isticmaalnaa madal kale.
Waxa ugu horeeya ee aan sameyneyno ayaa furan WhatsApp Web oo waafajinta qalabkeenna sidii aan horay kuugu soo barannay.
Marka kalfadhiga la bilaabo, waxaan si fudud u raacnaa talaabooyinka soo socda:
Waxaan gujineynaa isticmaale ama koox aan dooneyno inaan wicitaan muuqaal ah ka yeelno.
Marka gudaha wadahadalka, guji astaanta «clip» ka muuqda qaybta kore ee midig.
Waxaan dooranaynaa ikhtiyaarka ugu dambeeya ee kamarad fiidiyow ah ay ka muuqato calaamadda xiriiriyaha.
Waxaan heli doonnaa ogeysiis "U aado Messenger si aad u abuurto qol."
Hawshan ayaa noo oggolaan doonta Abuur qol fiidiyoow ah oo ilaa 50 qof ah iyada oo loo marayo barnaamijka Rasuulka oo ay leedahay shirkadda Faceobook. Adigoo si fudud u riixaya xiriiriye, qof kasta oo WhatsApp wata ayaa qolkaas geli kara.
Waana tan qaaciddada ay WhatsApp dejisay si aan ugu sameyn karno wicitaanno fiidiyoow ah Shabakadda WhatsApp Web si fudud
Beddelka WhatsApp si loogu sameeyo wicitaanno fiidiyoow ah
Wicitaanada fiidiyowga ee noqday kuwa caanka ah waxay ku jiraan barnaamijyo badan, waxaan ka hadli doonaa qaar ka mid ah:
Xulashada dhaqanka, codsi qof walba ogyahay maxaa yeelay hormuud bay ka ahayd arrintan. Waxay u oggolaaneysaa ilaa 10 qof fiidiyoow iyo illaa 25 maqal ah. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Tani waa beddelka Google, natiijo fiican. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa wicitaannada fiidiyowga ee illaa 10 qof oo leh hawlo badan iyo nidaam isku dheelitiran. Waxaad toos uga heli kartaa Halkan.
Kuwa ugu caansan waqtiyadii ugu dambeeyay, Waxay u oggolaaneysaa ilaa 100 isticmaale gebi ahaanba isku mar, waxay sidoo kale leedahay maqaarro aad u xiiso badan iyo shaqeynaya. Waad soo dejisan kartaa arjiga Halkan.
Taladayada ugu dambeysa (ee aan ahayn tan ka xun) waa beddelka tikniyoolajiyad kale oo weyn, waxaan ka hadalnaa Facebook. Beddelka ugu caansan ee dalal badan, oo lagu daro qof kasta oo aad taqaanid ayaa yeelan doona Facebook, maxaad kale oo aad weydiisan kartaa? Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » Sida loo sameeyo wicitaan fiidiyoow ah Webka WhatsApp, talaabo talaabo ah
Sida loo helo faylasha Windows 10